Russiya & Maraykanka oo heshiis ka gaaray mustaqbalka Suuriya – Kasmo Newspaper
Russiya & Maraykanka oo heshiis ka gaaray mustaqbalka Suuriya
Updated - November 12, 2017 12:53 pm GMT
London (Kasmo), Maraykanka iyo Russiya ayaa is afgarad ka gaaray geedisocodka lagu habaynayo mustaqbalka Suuriya, ka dib marka laga adkaado kooxda Daacish.
Qoraal wadajir loo soo saaray, Sabtidii 11kii Nofember, kuna saabsan xaalka Suuriya, wuxuu daba socday kulankii 1aad ee 2da mas’uul dhexmara bishii July, markii faragalintii Ruushka ee doorashadii Maraykanku soo baxday.
Moskow ayaa laga wariyay in Assad oggolaaday “Geedisocodkii Geneva” ee dhexdhexaadintii Qarammada Midoobay, horseedkana ka ahaa wakiilka gaarka ah Stephen de Mistura. Hannaankani wuxuu la imanayaa isbeddel dhanka dastuurka ah oo ay ku soo xigi doonto doorashooyin Qarammada Midoobay dusha kala socon doonto.
Ujeeddada 2da Madaxweyne, Putin iyo Trump waxay ahayd in ay heshiiska uga dhawaaqaan inta uu socdo kulankii APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) ee De Nang (Vietnam), heshiiskaas oo Amerika looga arko guul Trump ka gaaray sidii uu Putin ugu qancin lahaa in qorshohii Astana meel la iska dhigo.
Khamiistii, Xoghayaha Arrimaha Dibadda Maraykanka, Rex Tillerson ayaa ka digay in kulanka 2da mas’uul baaqan karayo sababta iyada oo dhinacyadu ayan isla meel dhigin arrimihii “Deliverables”-ka ee lagu dhawaaqi lahaa.
Sida mustaqbalka Suuriya, istrateejiyaddii lagu gaari lahaa hub-kadhigista Nuclear-ka Kuuriyada Woqooyi iyo hirgalinta heshiisyadii Minsk ee Ucraine. Jabinta Daacish ka dib waa lagama maarmaan in la qeexo mustaqbalka Suuriya, in kasta oo Washington la tahay in Assad meeli uga bannaanayn.
Jabka Daacish waxaa kale oo meesha uu ka saarayaa cadawgii guud, laakiin wuxuu kordhinayaa halista diyaaradaha Militariga Russiya ee taageeraya Assad in ay isku dhacaan kuwa Maraykanka ee taageera cadowgiisa.
Sidaa darteed 2da dhinac waxay ka shaqeeyen “Road map” ku fadhiya 3 qodob: 1-xoojinta in aanay 2da ciidan isku dhicin (Deconfliction), 2- yaraynta khasaaraha dagaalka sokeeye ee socda, iyo 3- dib u bilaabista waanwaantii Q.M. ee Stephen de Mistura.
Intaa ka dib waxaa la qorshaynayaa qabashada doorashooyin Qarammada Midoobay dusha kala socoto, Maraykanku waxay rumaysanyihiin in Assad looga adkaan karo hab dimuqraadi ah. Haddii taasi dhacdana waa in laga sii fakaro xalka mustaqbalkiisa shakhsiga ah iyo cidda qaban doonta beddelkiisa, ilaalinta danaha kooxda uu matalo, si nabaddu ayan u burburin ka hor inta ayan bilaabanba.